Bhinzi dzakasvibirira nepepuru tsvuku uye kottage chizi | Kicheni Mapepa
Green bhinzi nepepuru tsvuku uye kottage chizi
Maria vazquez | | Vegetable Recipes
Kana iwe uchitsvaga yekutsva yemuriwo yekuwedzera pane yako menyu svondo, iyo yandiri kupa nhasi inogona kukugonesa. Mahairi eGreen ane Red Pepper uye Cottage Cheese anogadzira mumaminetsi gumi nemashanu. Necheji iyi, nguva haichisiri chikonzero cheku idya zvine utano uye zvishoma mukati mevhiki.
ari bhinzi yegirini izvo zvakabikwa zvishoma kwazvo mune ino resipi kuitira kuti vachengetedze zvese zvavo zvivakwa. Ivo ndivo protagonists, kunyangwe vachiita senge vachiperekedzwa nezvakawanda zvinoshandiswa senge tsvuku tsvuku, madomasi akaomeswa, walnuts uye kottage chizi. Unogona kutsiva walnuts maamondi, iyo kottage chizi ye feta feta… fadza!
Uri kutsvaga nzira ine hutano, yakajeka uye inokurumidza? Aya maGreen Beans ane Red Pepper uye Cottage Cheese anosangana zvese zvitatu zvinodiwa.
Nguva yekugadzirira: 4 M
Kubika nguva: 10 M
Nguva yakazara: 14 M
2 gumi nembiri bhinzi dzakachena dzakachena
Ogo rogo mhiripiri
1-2 akaomeswa matomatisi
Isu tinodziya mvura muhari. Kana ichinge yavira wedzera bhinzi womirira mvura kuti ifashaidze futi. Saka, tinoverenga mineti uye tinovaburitsa.
Mukapu inopisa, tinopisa 2 maspuniji emafuta. Tinosvina mhiripiri kusvikira yanyorova zvishoma.
Isu tinowedzera bhinzi yegirini, madomasi akaomeswa uye munyu wemunyu. Sungai musanganiswa kwemaminitsi 3-4.
Tinowedzera walnuts uye ngatitsikei mumwezve mineti.
Tinoshumira mundiro kana mundiro uye shongedza necottage cheese crumbled.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Vegetable Recipes » Green bhinzi nepepuru tsvuku uye kottage chizi
Basic pizza mukanyiwa
Blackberry jam strudels zviri nyore kwazvo!